Xubinnimada - Ururka Xarumaha Xarumaha Qorista
Xubinnimada IWCA waxay u furan tahay dhammaan xirfadleyda xarunta qorista, aqoonyahannada, iyo macallimiin iyo sidoo kale kuwa xiiseynaya xarumaha qoraalka iyo barista iyo umeerin qorista. Ku biirista IWCA, waxaad ka mid noqon doontaa bulshada caalamiga ah ee u heellan sidii loo xoojin lahaa qaybta qorista daraasadaha xarunta.
Faa'iidooyinka xubinnimada IWCA waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn waxyaabaha soo socda:
U codee doorashooyinka waxaadna u adeegtaa guddiga IWCA
Helitaanka dhacdooyinka khadka tooska ah iyo bogga xubinnimada IWCA
Fursadaha Iswaafajinta Mentor
U-qalmitaanka dalbashada deeqaha iyo magacaabidda magacaabista
Qiimaha la dhimay ee Joornaalka Xarunta Qorista iyo WLN
$ 50 / sanadkii xirfadlayaasha
$ 15 / sanadkii ardayda
Ku biirista IWCA waxay ka dhigan tahay inaad taageereyso qorista xirfadlayaasha xarunta iyo deeqda waxbarasho; xubinnimadaadu waxay si toos ah u taageertaa annaga dhacdooyinka, joornaalada, abaalmarinta, Iyo deeqo. Ku soo biir IWCA ama ka soo gal koontadaada halkan.
Mar alla markii aad xubin noqotid, hubi siyaabaha aad uga qayb qaadan karto IWCA.
Ma jeclaan laheyd inaad waxbadan ka qabato taageerida xirfadlayaasha xarunta qoraalka iyo deeqda waxbarasho? Bal eeg xulashooyinkayaga loogu talagalay xafladaha xafladaha iyo samaynta tabarucaad.